Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा नक्कली बिहे दर्ता ! - Pnpkhabar.com
सुर्खेत : सुर्खेतको एक वडा कार्यालयले नक्कली विवाह दर्ता गरेको पाइएको छ। सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कार्यालयले बसाइसराइँ गरेर अन्तै गइसकेको व्यक्तिलाई नक्कली विवाह दर्ता गराइदिएको पाइएको हो। हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ मा बस्दै आएका ५७ वर्षीय भीमबहादुर बुढाको चिंगाड गाँउपालिका–४ को वडा कार्यालयले दोस्रो विवाह दर्ता गरिदिएको हो।
बुढाले श्रीमती तिलसरी वली (गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नं. १) संग विवाह गरेको भन्दै २०७६ माघ ४ गते नक्कली विवाह दर्ता गराएका हुन्। उनले कान्छी श्रीमतीसँग ०७४ भदौ १९ गते विवाह भएको भन्दै विवाह दर्तामा उल्लेख गरिएको छ।
तर सो विवाह दर्ता वडा कार्यालयको रजिस्ट्रारको अभिलेखमा छैन। बिहेको दर्ता नम्बर १५६ उल्लेख गरिएको छ। तर वडा कार्यालयको रजिस्ट्रारको अभिलेखमा भने ०७६ सालमा १ सय १३ वटा मात्र भएको देखिएको छ।
जेठी श्रीमती गीताले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बहुविवाह मु’द्दा हालेपछि बिसीसँगै कान्छी श्रीमती अहिले हिरासतमा छन्।
जिल्ला प्र’हरी कार्यालयले यही साउन १० गते प’क्राउ गरी अनुसन्धान गरिहेको जिल्ला प्र’हरी कार्यालयका प्र’हरी निरिक्षक गोपाल रायमाझीले जानकारी दिए।
श्रीमानले अब बिहे दर्ताको प्रमाण बनाइसकें भन्दै धम्क्या’एका जेठी श्रीमती गीताले बताइन्। साथै उनले नक्कली विवाह दर्ता गर्न चिङ्गाड गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष अम्मरबहादुर चन्दको मिलेमतो रहेको आ’रोप लगाइन्।